Palestina: Ireo “Mpandeha Lavitra Hoan’ny Fahalalahana” Mihantsy ny Fanavakavahana Anaty Fiara Fitateram-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Reza Nahaboo
Voadika ny 01 Aogositra 2017 17:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, srpski, English
[rohy amin'ny fiteny anglisy] Ny 15 Novambra, andiana Palestiniana mpikatroka no voasambotra raha iny nandeha tanaty fiara fitateram-bahoaka nitatitra israeliana mpanjanaka iny. Miantso ny tenany hoe “The Freedom Riders” (Ireo Mpandeha Lavitra Hoan'ny fahalalahana) ireo mpikatroka ireo, hevitra nalaina avy amin'ireo amerikana mafana fo mpiaro ireo zo sivily tamin'ny taona 1961.
Tanjona ny hampisehoana fa mitondra amin'ny fanavakavahana ny fibodoana ataon'i Israely any Cisjordanie. Satria ireo fiara fitateram-bahoaka ho an'ireo mpanjanaka dia mandeha any amin'ireo toerana izay tsy azon'ny ankamaroan'ireo Palestiniana aleha, voahilika ireo Palestiniana araka izany.
Na izany aza, nanipika tsara ireo mpikatroka ireo fa tsy ny hahazo ireo zo hitovy amin'ireo israeliana mpanjanaka akory no tanjon'izy ireo:
Amin'ny fanaovana io fihetsika io, tsy tian'ireo palestiniana ny tsy fanavahana azy ireo ao anaty fiara fitateram-bahoakan'ireo mpanjanaka, satria ny fisian'ireo mpanjanaka sy ireo foto-drafitrasa izay manompo azy ireo dia tsy ara-dalàna ary tsy maintsy ho ravàna. Ao anatin'ny tolona ataon'izy hisian'ny fahalalahana, ny rariny sy ny fahamendrehana, tian'ireo Palestiniana ny mba hahafahan'izy ireo mivezivezy malalaka eny amin'ireo lalana natao ho azy, eny amin'ireo tany natao ho azy, ary hahazo ny zo ho any Jerosalema.
“VELONA i Rosa Parks! Ireo Palestiniana mandeha ao anatin'ireo fiara fitateram-bahoaka natokana ho an'ireo israeliana mpanjanaka, ho any Jerosalema.” Sary an'i @CarlosLatuff
Britanika i Holly, mpilatsaka antsitrapo avy amin'ny “International Solidarity Movement” (Hetsika Firaisankina Iraisampirenena), ary tany an-toerana. Ity no zava-nitranga araka ny filazany:
Omaly, ijoroako vavolombelona fa Palestiniana enina mpikatroka no nangataka ny fahalalahana, ny rariny sy ny fahamendrehana manohitra ny politikan'ny fanavakavaham-bolonkoditra ataon'i Israely, raha iny niezaka ny hahazo ny fiara fitateram-bahoaka natokana ho an'ireo mpanjanaka iny ry zareo ary niezaka ny hihazo an'i Jerosalema-Atsinanana, no nalain'ireo Tafika Mpananibohitr'i Israely (FOI) ary dia voasambotra izy ireo. Tamin'ny tafatafa ho an'ny gazety, mikasika izay nanosika ny hetsik'izy ireo, nanazava ireo mpikatroka fa ny hetsika ho an'ireo zo sivily ao Etazonia sy ireo herim-pon'i Rosa Parks no nanintona azy ireo. Voasinton'ireo tolona nataon'ny Afrikana-Amerikana izay nandeha niady nanohitra ny fanavakavahana sy ny tsy fitoviana tao Etazonia, sy ny an'ireo Afrikàna Tatsimo izay niady handresena ny fanavakavahana izy ireo, te-hampiseho amin'izao tontolo izao ireo Palestiniana “Mpandeha lavitra ho an'ny fahalalaana” fa tsy hafa tsy akory ireo sakana atrehin'izy ireo isan'andro.
Samihafa amin'ny tao Atsimon'i Etazonia nandritra ny taona 60, tsy mahita takelaby famantarana manodidina ireo mpanjanaka na ireo toerana fisavàna ianao milaza fa “Tsy mila palestiniana eto” – hain'i Israely tsara mihitsy ny mitantana ny miliny fifandraisana amin'ny vahoaka mba tsy hanaovana ireo tsikera manavakavaka amin'io karazana io mety ho hita any amin'ireo firenena hafa “demokratika” mamatsy azy ara-bola. Ara-teknika, mahazo fahalalahana mandeha lavitra ao anaty fiara fitateram-bahoaka natokana ho an'ireo “mpanjanaka irery ihany” ireo Palestiniana ary afaka mamily fiara eny amin'ireo làlana natokana ho an'ireo “mpanjanaka irery ihany”, nambaran'ireo media sosialy israeliana sy ireo mpanjanaka izay nidina tamin'ireo fiara fitateram-bahoaka ireo, omaly. Saingy amina fomba miafina no ametrahan'i Israely ny fanavakavahana, ny tsy fitoviana sy ny fandàvana atao amin'ireo Palestiniana tsy handia ny taniny. Afaka mandeha amin'ireo fiara fitateram-bahoaka sy ireo làlana ry zareo Palestiniana, afa-tsy ireo fiara fitateram-bahoaka mitatitra mankany amin'ireo tany voazanaka fantatra manerantany ho tsy ara-dalàna, na mankany Jerosalema Atsinanana izay tsy azon'ireo Palestiniana hidirana. Jerosalema Atsinanana no vinaina ho renivohitry ny fanjakana Palestiniana amin'ny ho avy, nefa, raràn'i Israely tsy hiditra ao ny ankamaroan'ireo Palestiniana raha tsy misy fahazoandàlana, izay tena tsy ho azo mihintsy. Noho izany, afaka manitatra hatrany ireo tanàna zanahiny ao Jerosalema Atsinanana i Israely, anisan'izany ny ao amin'ny faritra tena mampifanolana ao Cheikh Jarrah, ary mitarika ny fakàna ireo faritra palestiniana be olona ao an-tanàna io mba ho voahodidin'ireo mpanjanaka israelianina izy ireo, mamotika araka izany ny mety hisian'ny renivohitra fehezin'i Palestina. Koa satria toa miharihary io, manantena aho, fa ny hetsika palestiniana Mpandeha Lavitra Hoan'ny Fahalalahana dia tsy natokana fotsiny hiadiana hanoherana ny fanavakavahana ao anaty fiara fitateram-bahoaka, midadasika be ny olana eto. Miatrika ny fitaovan'ny miaramila izay manara-maso azy ireo Palestianiana, ary tsy maintsy potehina izy sy ireo mpibodo koa.
Nandefa ity lahatsary manaraka ity teo amin'ny YouTube i Haitham Al Katib
Profesora Mazin Qumsiyeh, iray tamin'ireo Mpandeha Lavitra Hoan'ny Fahalalahana, nitantara teo amin'ny blaoginy ny zavatra niainany:
Voninahitra ny maha-Mpandeha Lavitra Hoan'ny Fahafahana sady niasa niaraka taminà lanjany avo lenta (ho an'ireo izay nandeha lavitra sy ireo marobe izay niasa tanaty aloka). Palestiniana roa hafa, izay tsy nandray anjara akory tamin'ny hetsika fa sendra teo ho toy ny mpampita vaovao/mpanaramaso, no voasambotra niaraka taminay ihany koa. […] Na dia nafahana aza izahay, dia nampangaina hatrany “ho niditra an-tsokosoko tany Jerosalema” ary “nanao fanakantsakanana ireo raharahan'ny mpitandro filaminana” mandra-pahatongan'izay fitsarana mety hisy.
Manazava izay fomba nataon'ny miaramila israeliana taminy taorian'ny fisamborana azy izy:
Tanora miaramila iray tena niedinedina ary nametaka anarana tamiko hoe “Professor Teez” (fitombenana no dikan'ny teny hoe “Teez” amin'ny fiteny arabo). Nivanitika tamin'io daholo izahay rehetra (mpandeha lavitra ho an'ny fahalalahana) sady niteny taminy aho fa tsy nanompa azy ary raha vao misy olona manompa ahy, izy ireo no voalohany indrindra mampietry ny tenany .
Ndeha hiverina amin'i Holly isika, izay namintina ny lahatsorany toy izao:
Eo ampitakiana ny mba hanajàna ireo zon'olombelona, mifanaraka amin'ny lalàna erantany, ireo Mpandeha Lavitra Hoan'ny Fahafahana, sady mba hanehoana fa hanohy hiatrika ampilaminana izy ireo hahazo ny fahalalahana, ny rariny ary ny fahamendrehana izay nitoloman'ireo vahoaka palestiniana hatry ny ela.
3 andro izayAmerika Latina